ချမ်းချမ်း ( သို့မဟုတ်) အနုပညာရှင်များ သတိထားရမည့် အဆိုတော် …. – Burmese Online News
ဟိုချမ်းချမ်းဆိုတဲ့အနု ပညာရှင် မင်းကအနု ပညာရှင်လား ဆိုတာကို ယ့်ကို ကိုယ်ပြန်မေးပါ။ ကိုယ်လွတ်ရုန်းတဲ့ အနုပညာရှင် လားဆိုတာပြန်မေးပါ …မိတ်ဆွေ မစစ်တာ အရမ်းသိ သာပါတယ်။နောက်တခု မင်း ကို ဟိုက သီချင်းတပိုဒ်လောက်ပဲ ပေးပြတာ ကျန်တာ ဘာမှ မသိရဘူးဆိုတော့ မင်းက သူတို့ ဘာတွေ လုပ်ပါ့မယ် ဘယ်လိုတွေ ရိုက်တင်မယ် ဆိုတဲ့ Chat Box Groupကို မကြည့်ခဲ့တာလား။ နောက်ပီး မင်း နဲ့အတူ အခြား မိန်းကလေးအဆိုတော်ဖစ်တဲ့ ဂျင်းနီ ၊ Lဆိုင်းဇီ၊ ရတနာမိုင်၊ ယွန်း၊ မေမဒီ ၊ တို့နဲ့ အဆက်သွယ် စကားစ မည်တောင် မပြောဖစ်ဘူးလား….မပြောဖစ်ဘူး ပြောရင်တော့ မင်းက တော်တော် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ ညံ့ဖျင်းတာပဲ တော်တော်ကို လူမှုဆက်ဆံရေးညံ့လို့သာလျှင် မင်း တို့ရိုက်ကူးရေးမှာ မင်းဘာမှ မမေးမိ တာနေမှာပေါ့ မင်းတို့ခဏနားေ တာ့ကော စကားမပြောကြဘူးလား။
သီချင်းအသံသွင်းရင်တော့ Covid-19လို Qဝင်ပြီး မသွင်းခိုင်းလော က်ပါ ဘူး ယောင်လို့တောင် ဘာဆို ဘာမှ မပြောဖစ်ဘူးလား မင်းကို ဒါဆို ဆို ဆိုလိုက်တာပဲလား …. ဟုတ်ပီ ဆိုပီ မင်းက ၁ကြိမ်၂ကြိမ် ၂ကြိမ်လောက် Stud ioအခန်း ထဲ မဝင်ခဲ့ရပဲ တကြိမ် တည်းနဲ့ အပြီးသတ် အကောင်း ဆုံးဆိုနိုင်ခဲ့တာမို့လို့လား။ချမ်းချမ်း တယောက်ပဲ သီချင်းလေး တပိုဒ်လောက်ဆိုပြီး sstဖြစ်နေတာ ဘယ်သူမှ ဘာမှမဖစ်ဘူး ….. လူမုန်းမှာ ကြောက်ပြီး ဟိုလူ့ထိုးချ နဲ့ အကုန်လုံးကလဲ ယုန်လေးကိုပဲ ဆဲနေတာ ယုန်လေးကလဲ သူတာဝန်ယူပြီးဖြေရှင်းပီးသားကို ဘာတွေဖုန်ထနေတာလဲ ….ချမ်းချမ်းစိတ်က အနုပညာရှင်စိတ်ဓာတ်နည်းနည်းမှ မရှိဘူး …. မီးလောင်ရာ သားကောင်ချနင်း ၊ ချမ်းချမ်း ဘယ်ပါတီက ဖစ်ဖစ် စိတ်မဝင်စားဘူး ….အခုလို ထဖြေနေတော့ စိတ်ထားက လုံးဝ စုတ်ပြတ်သက်နေတာ ….ဆဲတဲ့ သူတောင် ပါးရိုက်မယ်ဆိုပဲ …..
အဲ့လူတွေက နင့်ကို ထမင်းကျွေးတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေပဲ။မင်းက အနုပညာလောကထဲကို ယုန်လေးထက် နောက်ကျမှ ဝင်လာတာ မင်းစီနီယာပဲ …..နောက်ပီး မင်းသူဖန်တီးတဲ့ သီချင်းကို ဆိုတုန်းက တပိုဒ်ဆိုတယ် လို့ြေ ပာ တ ယ် …. ဟုတ်ပီ မင်းကိုယ်တိုင်ပဲ အဲ့အထဲမှာ အကဲဆုံးအလှုပ်ဆုံး ယွဆုံး ဆိုထားတာလေ ….နေ့တောင်မကူးသေးဘူး ထမင်းပန်ကန်ပျောက်မှာစိုးလို့ ချက်ချ င်း ရှင်း တာလား …ရှင်းရင်လည်း မင်း ဘာသာဖြေရှင်းလိုက်လေ …. ဘာလို့များ ယုန်လေးအပေါ် အပြစ်အကုန်ပုံချတာလဲ ….ချမ်းချမ်းရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို အင်တာဗျူးမှာ တွေ့ ရတာ ဆပ်ပြာသယ်လင်ပျောက်သလို ပါပဲ ….ဖြေရှင်းနေလိုက်တာ အသံကောင်းဟစ်တာ ကိုယ်လွတ်ရုံး တယ်ဆိုတာ ဒါမျိုး ….. အနုပညာသမား အခြင်းခြင်းအားပေးနှစ်သိမ့် ပေးမယ်မရှိဘူး။ စိတ်ဓာတ်အောက်တန်းကျမှန်း အခု မှသိတယ် ….ရေနစ်သူ ဝါးကူထိုးဆိုသာ သူ့လိုလူမျိုး တဖက်က မှားသွားသည်ဖြစ်စေမှန်သည်ဖြစ်စေ အနုပညာရှင် အချင်းချင်းမို့ ကာဗာတောင်ပေးသင့်တယ်….
အခုက ကပ်ကပ်လန်အောင်ပဲ ချမ်းချ မ်း ရယ်။ဘယ်သူ့ဘက်ကမှ မဟုတ်ဘူး …ချမ်းချမ်းက ပြသနာဖြစ်မှ ပြောပေးနေလိုက်သာ တဖက်လူကို စိတ်ဓာတ်တွေအောက်တန်းကျလို့ မနေနိုင်လို့ဝင်ပြောသာ ယုန်လေး ဘက်လဲမဟုတ်ဘူး။ ကဲ…ထားတော့ မင်းသာစစ်မှန်တဲ့အနုပညာရှင်ဆိုရင် မင်း အနုပညာရှင် အချင်းချင်း တွန်းမချသင့်ဘူး ချောက်မချသင့်ဘူး။ မင်းရဲ့ အင်တာဗျူးကို ငါ ၂ကြိမ် တိတိကြည့်တယ် ဘာကိုအသည်းပေါက်ဆုံးလဲဆိုတော့ ကိုယ်လွတ်ရုန်းတာမျိုး ရန်တွေ့နေပီး မင်းဘာမှမသိတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ အကုန် ပုံချအပြစ်တင်သွားတာမျိုး ဒဲ့ကိုရွံ့တာ။
ပန်းတနော်တွင် CB ဘဏ်ရှေ့တွင် လုယက်ခံရပြီး ဘဏ်မှထုတ်လာသည့်ငွေ ကျပ်သိန်း ၁၂၀ ကျော်ယူဆောင်သွား